Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kukadzi 13, 2018
Hutungamiri hweMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, hweNational Standing Committee, hunoti hwadaidzira misangano yechimbi chimbi miviri nemusi weChina, kuchitanga neNational Executive Meeting, ichizoteverwa ne National Council. Misangano iyi inonzi ichagadzirisa gakava riripo rmubato iri pakati paVaNelson Chamisa naVaElias Mudzuri.
Bato riri kutonga muSouth Africa, reAfrican National Congress, rinobuta nechisungo chekuti mutungamiri wenyika, VaJacob Zuma, vadzorwe kubato kuitira kuti mutungamiri webato iri, VaCyril Ramaphosa, vagadzwe semutungamiri mutsva weSouth Africa.
Misangano yeBotswana neZimbabwe inopera nhasi muGaborone nyanzvi dzichizeya zvingabude mumisangano iyi kuitira kuti zvisimudzire hupfumi hweZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzokurukura hurongwa hwebhanga guru renyika pamwe neZimTrade hwekuedza kumutsiridza makambani emuBulawayo
Komiti yeparamende inoona nezvemari yonetsekana nemaitiro emakambani ehurumende ari kutadza kutevedza zvinodiwa pamafambisirwo emari mumakambani aya.
Sangano reUrban Councils Association rinoudza komiti yeparamende kuti kambani yehurumende yeZimbabwe National Roads Authority kuti yaiita huori hunotyisa munguva yehurumende yaive pasi paVaRobert Mugabe.
Muchirongwa cheThe Connections na8pm, tiri kutarisa gakava riripo rekuti bvunzo dzeChirungu dzidzokororwe.